Ajọ Ifufe Lorenzo: njirimara, mbido ya na mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Ajọ Ifufe Lorenzo
Portillo nke German | | Ajọ Ifufe
El Ajọ Ifufe Lorenzo mere na Septemba 2019 ma ọ dị na 45 ogo ọdịda anyanwụ. Ọ bịara metụta ụsọ oké osimiri ebe ọdịda anyanwụ nke Europe n'ụzọ nke kwụsịrị na nsọtụ ebe ugwu Britain Isles. Ọ bụ ajọ ifufe kachasị egwu ịhụ na ọ bụ otu n'ime ụdị ihe ịtụnanya mbụ dị n'akụkụ a nke ụwa. Ọ bụ ajọ ifufe kachasị ike ịpụta na nso Spain ogologo oge anyị nwere ndekọ.
Maka nke a, anyị ga-arara edemede a chịkọtara njirimara niile nke Hurricane Lorenzo ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ya ọzọ, nke a ga-eme n'ọdịnihu.
1 Mgbanwe ihu igwe na ajọ ifufe
2 Ajọ Ifufe Lorenzo
3 Ajọ Ifufe Lorenzo na mpaghara Spain
4 Ọ ga-eme ọzọ?
Mgbanwe ihu igwe na ajọ ifufe
Anyị maara na nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe bụ mmụba na oke na ike nke oke ihu igwe dị ka ụkọ mmiri na idei mmiri. N'okwu a, ihe kachasị emetụta ọgbọ nke ifufe metụtara na-ebili ogo ụwa dum. A ghaghi iburu n'uche na ike nke oke ifufe nwere ihe jikọrọ ya na oke mmiri na-abanye na mbara igwe na ọdịiche dị n'etiti mmiri nke oke osimiri dị iche iche. Nke a pụtara na na mpaghara ebe mmiri kacha ukwuu na-amịkọrọ mmiri, oke mmiri ozuzo na-akwụsị ebe ọ bụ na mmiri a niile na-emeju ma mejupụta igwe ojii.
Site na mmụba nke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ, anyị ga-enwe mgbanwe na ike nke ikuku. Ebe ebe ọ dị na mbụ, ga-adị ọkụ karị ma, ya mere, anyị ga-enwe ọnụego evaporation dị elu. Ajọ ifufe Lorenzo tinyere isi na Europe ma, ka ọ na-aga n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, ọ nwetara ike ịghọ ajọ ifufe Atiya 5. Nke a bụ ụdị kachasị elu na ọkwa Saffir-Simpson. E jiri ya tụnyere ajọ ifufe nke Katrina bibiri na New Orleans na 2005..
Ọ bụghị naanị na a ga-eji ya tụnyere Hurricane Katrina na ike, kamakwa na mpaghara ọ na-ada. Ihe a puru iche na mpaghara Atlantic a bụ oge izizi edere ya. Dabere na nha niile nke ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara, ụzọ Hurricane Lorenzo mere ka mmetụta dị na kọntinent ahụ dịtụ mfe, nnukwu nsogbu dịkwa na Azores. Ọ bịarutere n'ógbè a dị ka ifufe nke 160 km / h na gus nke ihe karịrị 200, n'ihe ụfọdụ. Site na oge o ruru British Isles, ike agwusila ya nke na odighi ele ya dika oke ifufe.
Mgbe oke ifufe na-ebute n'oké osimiri, ọ na-eri nri na mmiri na-agbapụta ma rute oke ya mgbe ọ ruru n'ụsọ oké osimiri. Agbanyeghị, ozugbo ọ banyere na kọntinent ahụ, ọ na-ada mbà ma tufuo ike ọ na-abanye. Nke a na-eme ka oke ifufe a na-atụ ụjọ na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri karịa na mpaghara ndị dị n'ime ime. N'akụkụ dị n'ime ime obodo, ka a na-echekwa ya na oke ifufe.
Ajọ Ifufe Lorenzo na mpaghara Spain
Ọ dị obere ịhụ oke ifufe na ebe dịka nke anyị. Azịza mbụ e nyere ụdị obi abụọ a doro anya. Ihe kacha dị egwu bụ ntụpọ na ụdị nke ajọ ifufe a, mana ajọ ifufe na-amalite nguzobe ha n'Africa. Ọ bụ ebe a ka ebili mmiri nke ọgbaghara na-ebute nsogbu na nke a na-adọkpụ. Mgbe nsogbu ndị a rutere n'oké osimiri kachasị mma na Caribbean, ha na-aghọ oke ifufe dị egwu anyị na-ahụkarị.
Ihe nke oge a eruteghị Caribbean kemgbe ezutewo mmiri ọkụ nke na-eme ka ajọ ifufe ahụ. Kama ịga ọdịda anyanwụ ọ gafere ọwụwa anyanwụ. Dịka anyị kwurula na mbụ, ka ajọ ifufe ahụ guzobe, ọ bụ naanị mmiri dị mma nke na-eme ka nnukwu mmiri alụlụ mmiri kọwaa nke ọma, n'ikpeazụ, a na-akwụ ụgwọ ya na elu. Nke a bụ otu igwe ojii ajọ ifufe na-etolite.
Ọ ga-aga n'ebe ogo 45 n'ebe ọdịda anyanwụ maka Hurricane Lorenzo iji mepụta. Ọ bụ eziokwu na dị ka trajectị na-adịghị ahụkebe maka ihe anyị jiri, mana ka ewere gawa ugwu, ewerela udi nke ise. Ihe kachasị adọrọ mmasị banyere ihe ịtụnanya a bụ na ọ gara n'ụzọ pụrụ iche na, ọ bụ ezie na ọ gafeela mmiri na-ekpo ọkụ, ọ jisiri ike zuru oke wee ruo oke oke ifufe.
Ihe ndị a bụ ihe kpatara Hurricane Lorenzo ghọrọ otu ajọ ifufe ndị ama ama n'oge anyị. Banyere ọmụmụ nke ajọ ifufe a, anyị na-ahụ na o metụtara ngbanwe ihu igwe, dịka anyị kwuburu na mbụ. Ọ bụ eziokwu na ọ ga - achọta mmiri dị ọkụ karịa nke nkịtị ka ị nwee ike iru otu 5, mana N'ọnọdụ ọ bụla, ịdị adị nke ụdị ajọ ifufe a enweghị ike ịbụ ihe metụtara mgbanwe ihu igwe. Anyị chọrọ ọtụtụ ọmụmụ njiri mara na okwu ndị ọzọ yiri ya iji nwee ike hụ na ụdị ihe a. Ekwesiri iburu n'uche na mgbanwe ihu igwe na-enwe mmetụta ogologo oge nakwa na a ka enwebeghị ihe akaebe zuru oke iji nwee ike ijikọta nsonaazụ mgbanwe ihu igwe na nhazi nke Hurricane Lorenzo.
Ọ ga-eme ọzọ?
Obi abụọ nke ọtụtụ mmadụ bụ ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ajọ ifufe nke ụdị a na mpaghara anyị ọzọ. Meteorology na Spain na-akọwa na site na mgbanwe ihu igwe ọ dị mkpa ka anyị nwee ọmụmụ dịgasị iche iche na ihe ndị ọzọ yiri ya iji mara ma enwere ụdị ụkpụrụ ọ bụla ma ọ bụ na enwere mgbanwe n'omume ajọ ifufe. A chọrọ ịmata ihe n'ọmụmụ ihe na ọ bụ na, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ajọ ifufe ndị yiri ya rutere n'afọ ndị na-abịanụ iji nwee ike ikwu maka usoro a. Otu afọ tupu anyị enwee Leslie bụ onye nwere ụdị agwa ahụ Lorenzo nwere. Na nke a, nwere obi abụọ banyere mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na usoro nke ajọ ifufe.
Ajọ ifufe Leslie metụtara mba anyị ma bụrụ ajọ ifufe kachasị ike rute Alakụba Iberia kemgbe afọ 1842. A na-ewerekwa ya dịka otu n'ime oke ifufe Atlantic kachasị ogologo oge. O nwekwara akparamàgwà dị egwu ebe ọ nwere mgbanwe na-aga n'ihu na trajectory ya. Nke a mere na ndị ọkachamara enweghị ike ịme atụmatụ nke ọma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Hurricane Lorenzo na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ Ifufe Lorenzo
Ozizi banyere ịkpafu kọntinent
Ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ